မြန်မာ့နိုင်ငံေ၇းနှင့်ကျွန်တော့်အမြင် (၂) | Mandalaygazette's Weblog
2010/2012 Election, Politics, Issues
ကြည့်ပါ၊ အစိုး၇နဲ့ငြိမ်းချမ်းေ၇းယူထားတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ သူတို့ ၇ဲ့ ပြည်သူတွေကို ကောင်းကောင်း စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်၊ သူတို့ ၇ဲ့ ဒေသမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးပွားေ၇း လုပ်နိုင် တယ်၊ အစိုး၇နဲ့လည်းသူတို့ လိုချင်တာတွေကို ဆွေးနွေးနိုင်တယ်၊ အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကို သူတို့လူမျိုးစုတွေကထောက်ခံကြတယ်။ ကျန်တဲ့အစိုး၇နဲ့ ငြိမ်းချမ်းေ၇းမယူတဲ့ဒေသ ကပြည်သူတွေဆို၇င် ဘယ်လောက် ထိဒုက္ခေ၇ာက်ကြလဲ ဆိုတာသိကြပါလိမ့်မယ်၊ အထူးပြောပြနေစ၇ာလို မယ်မထင်ပါ။ အခုလည်း ငြိမ်း ချမ်းေ၇းယူထားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ အစိုး၇နဲ့ ပြဿနာတက်နေတာပဲဆိုပြီးစောဒကတက်လို့ တော့၇ တာပေါ့၊ အဲဒါကလည်း အစိုး၇နဲ့ သူတို့ လွန်ဆွဲ ကြတာပဲ။ သူတို့ လိုချင်တာ၇အောင် လုပ်ယူကြ တာလေ။ သူတို့ ကနှစ်ပေါင်း၄၀ ကျော်အစိုး၇နဲ့ တိုက်လာတာဆိုတော့ အနှစ်၄၀ ကျော်ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဆိုတော့ သူတို့ လူမျိုးစုတွေအတွက် ကောင်းမယ့်လမ်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ကြတယ်။ ငြိမ်းချမ်းေ၇းမယူတဲ့ဒေသက ပြည်သူတွေဆို၇င် အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ ဒုက္ခေ၇ာက်ကြလဲ။ အဲဒါကဘာကိုပြလဲ ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်တွေ၇ဲ့ အ၇ည်အချင်းကိုပြတယ်။ အခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်သုံးသပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒီအနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေ ဒုက္ခေ၇ာက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ ၇ဲ့ ပြည်သူတွေကအဆင်ပြေပြေနေနိုင်ကြတယ်။ မတူညီတဲ့ ခေါင်း ဆောင်မှုကိုပြတယ်။ အခုပဲကြည့်အမေ၇ိကန်က တောင် မြန်မာပြည်ကိုသူတို့ ၇ဲမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ပေါ်လစီဟာ မအောင်မြင်ဘူး ပြန်လည် သုံးသပ်၇မယ်လို့ ပြောလာကြပြီ။ မြန်မာပြည် သူတွေကိုကြည့်၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ၊ ထိုင်းမှာ ၂သန်း၊ မလေးမှာဆို ၂သိန်း အခြားနိုင်ငံ တွေမှာလည်း အများကြီးပဲ၊ အဲဒီလိုနိုင်ငံတကာ လှည့်ပြီးအလုပ်လုပ် နေ၇တယ်။ သူတို့တွေဟာ သူတို့မိသားစုကို ထမင်းနပ်မှန်အောင်ကျွေးဖို့ ဆို ပြီးတော့အခြားတိုင်းပြည်မှာ အနှိမ်ခံ အောက်ကျို့ ခံပြီ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေမလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေသွားလုပ်၇တယ်၊ မြန်မာတွေဆို၇င် အဲဒီနိုင်ငံတွေ မှာအ၇မ်းအထင်သေးခံ၇တယ်။ ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကိုလဲကြည့်ပါ၊ အလုပ်အကိုင်မရှိ၊ေ၇မလာ၊ မီးမရှိ၊ စီးပွားေ၇းမကောင်း၊ အဲဒီတော့စားစ၇ာမရှိ၊ အထည်ချုပ်ကမိန်းကလေးတွေဆို၇င် အနှိပ်ခန်းေ၇ာက်၊ အခြေအနေပိုဆိုးတဲ့သူတွေကဖာသည်ဖြစ်၊ ယောက်ျားလေးတွေဆို၇င် အ၇က်သမားဖြစ်၊ ခိုးဆိုးလုယက် သူတွေဖြစ်၊ ဘယ်လောက်ဒုက္ခေ၇ာက်ကြလဲ။ အဲဒါအစိုး၇မကောင်းလို့ ပေါ့၊ ငါတို့ တွေ အစိုး၇ကိုတိုက်နေတာအဲဒါတွေကြောင့်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ NLD နဲ့တချို့ ကပြောလာ၇င် ဘယ်မှာလဲ၇လဒ်၊ ဒီအစိုး၇ကအ၇င်ကတည်းကဒီအတိုင်းပဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ လာမလိမ်နဲ့လို့ပြန်မေး၇မလို ဖြစ်နေပြီ။ ငါတို့ တွေထောင်ကျ၊ သေကျ၊ အနစ်နာခံနေတာမတွေ့ ဘူးလားလို့ မေး၇င်တော့ နံ၇ံ ကိုခေါင်းနဲ့ ဘာလို့ တိုက်တာလဲလို့ ပြန်မေး၇မှာပဲ။ နံ၇ံကိုခေါင်းနဲ့တိုက်သူတွေအတွက်ကတော့ ရွေး စ၇ာလမ်းမရှိဘူး။ ပြည်သူအများစုက အစိုး၇နဲ့NLD တို့ ၇ဲ့တိုက်ပွဲက မြေဇာပင် တွေပဲ။
ကျွန်တော်တခုသိချင်တာက NLDေ၇ာ၊ ထောင်ကျနေတဲ့ မင်းကိုနိုင်တို့ လိုကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်တွေက ရွေးကောက်ပွဲ ကိုလက်ခံမယ်ဆိုပြီးပြော၇င် အစိုး၇ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာပဲ။ အစိုး၇ ကအဲဒီလို လက်ခံမှာကိုမလိုလားဘူး။ အခုတော့ အစိုိး၇လိုချင်တဲ့လမ်းကို NLD နဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေလိုက်နေကြတာပဲ။ တခုမှလုပ်လို့ မ၇၇င်ဆန့် ကျင်ဘက်လမ်းကိုလုပ်ကြည့်၇မယ်။ နာဂစ်ကြောင့် ဒုက္ခေ၇ာက်သူတွေကိုကူညီကြတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေကိုပဲကြည့်ကြပါ၊ အစိုး၇ကဒုက္ခေ၇ာက်သူတွေကို ကူညီတာနှောင့်နှေးတော့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ အသီးသီးက သွားကူညီ ကြတယ်၊ အစကသွားကူညီ တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေကြတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး၊ သတင်းတွေမှာ ဓါတ်ပုံ တွေနဲ့အစိုး၇က ဘာမှမလုပ် ပေးဘူး၊ ကူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အစိုး၇ကဖြတ်ယူတယ်ဆိုပြီး တော့ပါလာ တော့ အစိုး၇ကကူညီတဲ့သူ တွေကို စတင်ကန့် သတ်တယ်၊ အဲဒီဒေသကိုမသွား၇ဘူး၊ အကူအညီ တွေကိုသူတို့ ကိုပေးသူတို့ဖြန့် ဖြူးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်လာတယ်။ သတင်းဖြန့် တဲ့သူတွေကေ၇ာ အစိုး၇ဆန့်ကျင်သူတွေကပါ အစိုး၇ကို သိက္ခာကြအောင် အစိုး၇ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ အခွင့် အေ၇း ပဲဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံေ၇းအ၇ေ၇ာအဖက်ဖက်ကပါ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခေ၇ာက်နေတာကိုမေ့ပြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ၀ိုင်းတိုက်ကြတယ်။ ကူညီတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်း သူတို့ ကိုယ်တိုင် ဖြန့်ချင်တယ် ဆိုတော့ ကူညီမှုတွေ၇ပ်သွားတယ်။ အချို့အဖွဲ့ အစည်းတွေက နောက်ဆုတ်သွားကြပြီး အစိုး၇ကို အပြစ်တင် တယ်။ အဲဒီ တော့ ဘယ်သူတွေ ဒုက္ခေ၇ာက်လဲဆိုတော့ အဲဒီဒေသကပြည်သူတွေပဲ ပိုဒုက္ခေ၇ာက် ကြ၇တယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ အစိုး၇ကိုလိုက်လျှောပြီး အစိုး၇နဲ့ပြေလည်ပြီး ကူညီခွင့်၇အောင် ကြိုးစားကြတဲ့ NGO တွေ၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ သူတို့အဲဒီလိုမကြိုးစား၇င် ဒုက္ခေ၇ာက် ပြည်သူတွေ အခြေအနေပိုဆိုးမယ်ဆိုတာကို မြင်ကြတယ်။ အဲဒီ NGO တွေ၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ၇ဲ့၇ပ်တည်ချက်၊ ၇ည်ရွယ်ချက်ကရှင်းလင်းတယ်ပြတ်သားတယ်၊ သူတို့ တွေ၇ဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းသည် ဒုက္ခေ၇ာက်ဒေသ ကလူထုကို ကူညီဖို့ လာတယ်၊ အစိုး၇နဲ့ အတိုက်အခံလုပ်ဖို့ လာတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာပဲ။ သူတို့တွေက သူတို့ တွေ၇ဲ့ ၇ည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင် အစိုး၇နဲ့ ပြေလည်အောင်နေပြီး လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ သူတို့ ၁၀၀ ဖိုးကူညီလို့၁၀ ဖိုးပြည်သူတွေဆီေ၇ာက် တယ်ဆို၇င်တောင်မှ ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတဲ့ သူတို့ ၇ည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်။ အဲဒါကတချို့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ၇ဲ့၇ည်မှန်းချက် အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ နည်းလမ်းတွေပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့အဲဒီ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုချီးကျူးတယ်၊ အဲဒါမှ တကယ့်သတ္တိ၊ မှန်ကန်တဲ့စွန့် လွှတ်မှု၊ အနစ်နာခံမှု လို့မြင်တယ်။ သူတို့တွေ သာအဲဒီလိုမလုပ်ဆောင်ခဲ့၇င် အဲဒီဒေသကလူတွေဘယ်လောက် အခြေအနေ ဆိုးမယ်ဆိုတာ မစဉ်း စား၇ဲစ၇ာပဲ။ အခုထက်ထိလည်း အဲဒီအဖွဲ့ အစည်းတွေဟာ ဒုက္ခေ၇ာက် ဒေသကလူထုကို ဆက်လက် ကူညီ နေကြတုန်းပဲ။ ဒါက အဖွဲ့ အစည်း၇ဲ့ ဦးတည်ချက်က အခြေအနေ အ၇ အချိန်အခါအ၇ မပြောင်း လဲဘူးဆိုတာကိုပြတယ်၊ နည်းလမ်းသာပြောင်းသွားတယ်။ ဘယ်လိုအ ခြေအနေေ၇ာက်ေ၇ာက် သူတို့ ၇ဲ့ ဦးတည်ချက်ကို နည်းလမ်းပြောင်းပြီးေ၇ာက်အောင် သွားနိုင်တာက အောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့ အစည်းပဲ။ NLD နဲ့ အစိုး၇ ဆန့်ကျင်သူတွေကို ကြည့်၇င်သူတို့ တွေဟာအစိုး၇နဲ့ တိုက်ခိုက်၇င်း မူလဦးတည် ချက်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူကောင်းစားေ၇း နဲ့ဝေးကွာလာတာကိုတွေ့ ၇တယ်။ ၁၉၈၈အေ၇း အခင်းက မဆလစနစ်ကြောင့် ပြည်သူတွေမွဲတေ၊ဒုက္ခေ၇ာက်ကျတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေး၇မယ်ဆိုတာကို အခြေခံတယ်။ အဓိကကတော့ ပြည်သူအများစု ကောင်းစားေ၇းပဲ။ အဲဒီတော့အဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်း အဲဒါဆို၇င် ပါတီစုံစနစ်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ပါတီစုံစနစ်ကိုဦးတည်ကြတယ်။ အဲဒီမှာNLD အပါအ၀င်အဖွဲ့ အ စည်းတွေအားလုံး ဦးတည်ချက်လွဲကြတော့တာပဲ။ ဒီမိုကေ၇ဒီ၇ရှိေ၇း၊ (ပါတီစုံစနစ်၇ရှိေ၇း) က နံပါတ်တစ်ဦးတည်ချက်ဖြစ်သွားပြီး၊ NLD ပါတီအာဏာ၇ရှိေ၇းကဒုတိယဖြစ်ကာ၊ ပြည်သူတွေ ကောင်း စားေ၇းကနောက်ဆုံးေ၇ာက်သွားတာပဲ။ အစိုး၇မှာလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ၊သူတို့ ၇ဲ့ ဦးတည် ချက်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးပြီး NLD နဲ့ဆန့်ကျင်သူတွေကို မှေးမှိန်အောင် လုပ်ပြီး သူတို့အာဏာတည်မြဲေ၇းကိုလုပ်နေ၇ာကနေ၊ NLDနဲ့ ဆန့် ကျင်သူတွေကိုနှိမ်နှင်း၇င်း ပြည်သူ ကောင်းစားေ၇းကနောက်ေ၇ာက်သွားပြီး သူတို့ အာဏာ၇ရှိေ၇းကရှေ့ေ၇ာက်လာတယ်။ အဲဒီတော့ ခံ၇ တာက ပြည်သူတွေပဲပေါ့။ သေချာ တာကတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ပြည်သူကောင်းစားေ၇း ကနောက်ေ၇ာက်နေတယ်ဆိုတာပဲ။ အစိုး၇ကလည်း NLDအပါအ၀င်ဆန့်ကျင်သူတွေကိုအ၇င်ရှင်းပြီးမှ ပြည်သူ တွေအတွက်လုပ်မယ်၊ NLDအပါအ၀င်ဆန့်ကျင်သူတွေကလည်း အစိုး၇ပြုတ်ချပြီးမှ NLDအာဏာ၇ ၇င်ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဟာတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေကမူလဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၈၈ အေ၇းအခင်း၇ဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကောင်းစားေ၇းမှမဟုတ်ပဲ။ အစိုး၇ကအာဏာတည်မြဲေ၇း၊ NLDအပါအ၀င်ဆန့်ကျင် သူတွေကဒီမိုကေ၇စီ၇ရှိေ၇းနဲ့ အာဏာ၇ရှိေ၇းက ရှေ့ေ၇ာက်နေတာတွေ့ ၇ တယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီကြားကာလမှာတော့ ပြည်သူတွေ ခံကြ ကွာလို့ ပြောနေကြသလိုပဲ။ ပြည်သူ ကောင်းစားေ၇းနဲ့ ဒီမိုကေ၇စီကသီးခြားစီဆိုတာကိုမကွဲပြားကြဘူး။ ဒီမိုကေ၇စီမရှိပဲ ပြည်သူကောင်း စားေ၇းလုပ်လို့ ၇တယ်ဆိုတာမမြင်ကြတော့ဘူး။ ဒီမိုကေ၇စီ၇၇င် ပြည်သူတွေအလိုလိုကောင်းစားမယ် ဆိုပြီးပြောလာကြတယ်။ တရုတ် နဲ့ဗီယက်နမ် အစိုး၇တွေက တစ်ပါတီစနစ်ပဲ၊ သူတို့ပြည်သူတွေ ကောင်းစားနေကြပြီ။ စင်ကာပူ၊ ရုရှ ကလည်းပါတီစုံသာဆိုတယ် အတိုက်အခံတွေကို နှိပ်ကွပ်ထားပြီး သူတို့ ပဲအာဏာ၇အောင်လုပ်ထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ပြည်သူ တွေကိုလည်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားကြတယ်။ အစိုး၇ေ၇ာ၊ NLDအပါအ၀င်အစိုး၇ဆန့် ကျင်သူတွေပါ အဓိကဦးတည် ၇မှာကပြည်သူအများစုကောင်းစားေ၇းပဲ။ နည်းနည်းကောင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ များများကောင်းတာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒါကိုပဲ ၇ည်ရွယ်၇မယ်။ အစိုး၇ကတော့ လက်ရှိအာဏာ ရှိတဲ့အတွက်လျှော့ပေးမှာ မဟုတ် ဘူး၊ သူတို့ ကိုဆန့် ကျင်သူတွေကို ဘာမှလုပ်လို့ မ၇အောင် လုပ်ပြစ် ထားတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ NLD နဲ့ အစိုး၇ ဆန့်ကျင်သူတွေ၇ဲ့ ခေါင်းဆောင် တွေ၇ဲ့မပါးနပ်မှု ကြောင့်၊ မိမိတို့ ၇ဲ့လက်ရှိ အခြေအနေကိုကောင်းကောင်း မသုံးသပ် နိုင်တာကြောင့်ပဲ။ အဲဒီလိုသာအ ခြေအနေမှန်ဖြစ်တဲ့ အစိုး၇ ကဘယ်တော့မှသူတို့ လိုချင်သလိုလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုမြင်မယ် ဆို၇င် အစိုး၇နဲ့ လိုက် လျောညီထွေ အဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံပြီး သူတို့ ပေးတာလေးပဲယူပြီး အပြု သဘောလုပ်ဆောင်၇င် ကျွန်တော်တို့ ၇ဲ့ ပြည်သူတွေမှာ ဒီဒုက္ခတွေကနေ အမြန်လွတ်မြောက်မယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်တော် ကတော့ NLD နဲ့ အစိုး၇ ဆန့်ကျင်သူတွေကို သိက္ခာတွေကိုဘေးဖယ် ထားပြီးပြည်သူ့ အကျိုးကိုပဲ ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊ တခါတည်းနဲ့ အကောင်းဆုံးမလုပ်ပေးနိုင်၇င် တောင် တဖြေးဖြေးလုပ်ပေးလို့၇ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြော၇၇င် NLD နဲ့ဆန့် ကျင်သူတွေမှာရွေးစ၇ာလမ်းမရှိတော့ဘူး၊ NLD ကပြည်သူ တွေ အတွက်ဘာမှ မ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ထိပ်တိုက်၇င်ဆိုင်ေ၇းဆိုတဲ့ လမ်းစဉ် အမှားတွေကြောင့်ပဲ။ ဘယ်သူမှန်တယ်၊ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကတော့ အချိန်ကဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့် မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုအချိန်က အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့အထိတော့ ပြည်သူတွေကိုမစောင့်ခိုင်းပါနဲ့။ အေ၇း အကြီးဆုံး ကတော့ ကျွန်တော် တို့ ပြည်သူတွေမြန်မြန်ကောင်းစားဖို့ ပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ ခေါင်း ဆောင်တွေ အနေနဲ့ အမှန်ကို မြင်ဖို့ အလွန်အေ၇းကြီးပါတယ်။ ဒေါ်စုနှင့်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေကိုတော့ အပြစ်မမြင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူတို့ တွေဟာ အစွန်းေ၇ာက်တွေ၇ဲ့ အသုံးချခံ ဖြစ်နေလို့ ပဲ။ ဒေါ်စုနှင့်ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်တွေကို အကြံပေးချင်တာကတော့ မအောင်မြင်တဲ့ လမ်းစဉ် ပြည်သူတွေ ဒုက္ခေ၇ာက်မယ့်လမ်းတွေကနေထွက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို လက်ငင်းအကျိုး ပြုမယ့် လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အခြားအကြောင်းအ၇ာတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ေ၇း ခင်မင်မှုတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ေ၇းလေးစားမှုတွေ၊ အမုန်းတွေ၊ ကိုမကြည့်ပဲ ပြည်သူ့့အကျိုးတခုတည်းကိုပဲ ကြည့်စေချင် ပါတယ်။ အနစ်နာခံတာ၊ စွန့် လွှတ်စွန့် စားတာတွေ တော်လောက်ပါပြီ၊ လက်တွေ့ နိုင်ငံေ၇းကိုလုပ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးနိုင်မဲ့ တတိယလူ၊ ဆိုလိုတာကအစိုး၇နဲ့ မပတ်သက် သူ၊ အစိုး၇ကိုလည်းမမုန်းတဲ့သူတွေကို အကြံပေး အဖြစ်ပြောင်းကြပါ၊ အဲဒါမှအကြံ ကောင်းတွေ၇မှာ ဖြစ်တယ်။ အစိုး၇နဲ့ အပြုသဘောဆက်ဆံပါ၊ အစိုး၇ ပေးတာလေးနဲ့ ပဲ၇အောင်ယူပြီး အဲဒီကနေမှ ပြည်သူတွေ၇ဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါ။ အစိုး၇နဲ့ အပြု သဘောဆက်ဆံ၇င် ပြောခွင့်ဆိုခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေလည်း၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲပြီးခါစလိုမျိုး ပြန်၇လာနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ထိပ်တိုက် ၇င်ဆိုင်ေ၇း ဆိုပြီးတော့ အမှားတွေထပ်မလုပ်ဖို့ ပဲအေ၇းကြီးပါတယ်။ အဲဒါမှလည်း ပြည်သူတွေ လက်ရှိခံစား နေကြ၇တဲ့ဒုက္ခတွေကနေ မြန်မြန် လွတ်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ Like this:Like Loading...
← မြန်မာ့နိုင်ငံေ၇းနှင့်ကျွန်တော့်အမြင် (၁)	Autoplay ကိုပြင်ပြီးတော့virus ရန်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြရအောင် →
10 thoughts on “မြန်မာ့နိုင်ငံေ၇းနှင့်ကျွန်တော့်အမြင် (၂)”
May 29, 2010 at 12:43 pm Reply
ဒေါ်စုကိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မမျှော်တော့ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲပြီး ဘာမှန်းမသိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊ သူအကျယ်ချုပ်က လွတ်လာတဲ့အချိန် လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူဘာတွေလုပ်မလဲ ဆိုတာပဲ ကြိုသိချင်နေမိတော့တယ်။
May 29, 2010 at 4:17 pm Reply
I like to comment on Sayagyi`s survey about Burma dilemma. It is battle between human right respected 20-21st century democracy group ( Daw Suu and NLD) and notorious fascist invading army/ self- profit seeking/ 13th century feudalism/ kill-everyone-not-with-us gangsterism/ monk killers/ natural resources rapist, theft and money launderers. It is hard to describe exact wording for this junta`s cruelty against Humanity. Logically no reasonable sound person would call this Junta the government. This is invading army but not of the foreign forces and it is extremely difficult for every responsible global authority to remove incompetent, illegitimate from power. You can just ask the UN Chief how frustrated for him not been able to convince Than Shwe to respect the humanity and basic right. NLD and patriotic students got no chance to do anything against extremely brutal regime under one-sided butchering methods. If NLD agree to goes into election as suggested by Sayagyi, we all agree to abide by Junta`s set rule to obey the law. The law mean completion of suppression of the whole country by military. Please read the 2008 illegal constitution for your information. Those who dare to go into dragon den will feel the heat and melt in the military machine. Than Shwe will never allow democracy in this land. He was cornered and trapped by his own cruel system and now dangerously reaching the retiring age. What is lacking among the junta`s members? Trust. When Than Shwe lose his seat, new general will put him in Jail to follow the cycle of Gen Ne Win`s fate. This is what I call 13th century feudalism. Than Shwe has to bring permanent system of military control or nuclear program so that future generals will worship him as their great god-like leader. That is the reason he was carefully plotting for military dominance in Burma with this fake election. You got no chance to play with this fire at all. NLD got no other option but to oppose this fake election. People got no option but to boycott this fake plan. Desert the streets, polling stations, schools, bazaars and offices on election day. United, we will win. This is the show time for future of our beloved Burma. The image of failed election will be beamed by satellite to global audience who will stand with you to declare the fake election illegal. It will reach the UN. The international bodies only accept the Burmese people to sort out Burma problem. You got to make decision now. Do not get confused by Than Shwe`s psychological warfare. This is the duty of every decent thinking citizens to show your disapproval on election day. No one will come and touch you on election day for staying at home. This is the only way we can stop military to slave all of us after election. United. United. United. Please prove me wrong. Comments are more than welcome.
May 29, 2010 at 4:31 pm Reply
ခက်တော့နေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကို မဲမပေးနဲ့လို့ စည်းရုံးလို့ ရနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ မဲပေးတဲ့လူနှစ်မျိုးနှစ်စားပဲရှိလိမ့်မယ်။ ကြောက်လို့မဲပေးတဲ့လူ နဲ့ ကြိုက်လို့မဲပေးတဲ့သူ။ ဘာကိုကြောက်မလဲ၊ ဘာကို ကြိုက်မလဲဆိုတာကိုပဲ….
May 29, 2010 at 8:24 pm Reply
I like Timothy usage,
It is battle between human right respected 20-21st century democracy group ( Daw Suu and NLD) and notorious fascist invading army/ self- profit seeking/ 13th century feudalism/ kill-everyone-not-with-us gangsterism/ monk killers/ natural resources rapist, theft and money launderers.
I think you left the word ” Dacoits “
May 29, 2010 at 8:35 pm Reply
it clearly show who is right & who is wrong.
May 31, 2010 at 12:49 pm Reply
Comments to Timothy
First of all, thanks for commenting on my discussion. I like such kind of discussion rather than readingalot of cursing in political sites. I do understand your view, you hate the government due to their cruelty against Humanity. Whether you hate government or support opposition, it doesn’t matter so long as your intention is for Myanmar people sake. In your comment, you do accept that it is extremely difficult to remove the government by citing “it is extremely difficult for every responsible global authority to remove incompetent, illegitimate from power”. This is the reality and all Myanmar people agree that. It has been 20 years and the government is the same but the opposition becomes weak. I mentioned this in my discussion. You mentioned two big uncertainties in your comments.
1.	“It will reach the UN.” Then what will UN do? What did UN do when the government did not give power to elected NLD? Did NLD get power? Would you like to say there were not enough satellites to deliver message to Global audience at that time or you don’t want to accept reality?
2.	“No one will come and touch you on election day for staying at home.” Are you from government? Is that why you gave such guarantee?
You may be right if you are staying in other countries or cities in Myanmar, but not for the country side and border area. If the soldiers come and knock your door in the middle of night and ask you to give vote, will you say “Kill me and my family, I will die rather than voting”. You quoted the government as “kill-everyone-not-with-us “, we do not know how many of innocent people were die under this government. They might not even getaproper burial. But for the opposition, they at least gotamedal for their heroic activities for freedom and democracy etc.
NLD and opposition haves to treat all the people as their family member regardless of race or religion or where they live or what do they do. You can read back my discussion starting from “နာဂစ်ကြောင့် ဒုက္ခေ၇ာက်သူတွေကိုကူညီကြတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေကိုပဲကြည့်ကြပါ၊ ………………သူတို့တွေက သူတို့ တွေ၇ဲ့ ၇ည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင် အစိုး၇နဲ့ ပြေလည်အောင်နေပြီး လုပ်ဆောင်ကြတယ်။”, how some organizations findaway to relieve people difficulty. All people knew that some donation/supplies were seized by government for their use. But it didn’t help shouting from news and releasing condemnation statement. So what did the government do? Government simply took action by blocking those supplies to reach affected area. Who suffered, government or people in those areas? I was inspired by those organizations who still tried to support those people at that difficult time by cooperating with government because they consider those people as their family member so they desperately tried to findaway and do not care if it is to cooperate with government or not. The same example applied for those arm groups which took peace with government looked only for their people sake, not their dignity, their sacrifice. They simply understand that their children had suffered enough for more than 40 years so they had to accept whatever the government gave during negotiation. They didn’t get all they asked for, but they accepted agreement for their people sake. They don’t want their people to be sacrificed anymore.
For your reading, below is extracted from Irradaddy news.
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းတင်က မစ္စတာ ဂျင်မ် ၀က်ဘ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပါက ၄င်းအနေဖြင့် တွေ့ဆုံမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
“ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီလိုလူမျိုးကို တွေ့စရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ် ၊ ဒေါ်စုအနေနဲ့လည်း ဂျင်မ်ဝက်ဘ်ကို တွေ့ဖို့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ် ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူလုပ်နေတာ မြန်မာပြည်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစရာအကြောင်း တခုမှ မရှိဘူး ၊ သူလုပ်နေ တာ Sanctoin တွေဘာတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ ကိစ္စ ၊ ဒီစစ်အစိုးရကို Sanctoin လိုဟာမျိုးနဲ့မှ ကိုင်မထားရင် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး”ဟု ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
He thinks that sanction is effective. Do you all know Myanmar proverb “ဆင်ပိန်ကျွဲ”? The government is like that but for the poor people, how ????? Why don’t opposition tell all our people that “We, oppositions are sacrificing our life to bring prosperity to you, but don’t know how long will it take. So, cope with poor life for the time being. Though you die, you will get better life in reincarnation.”
Anyway, it is your view and I accept it because we all view from different angles. We will never see the same picture till we see from the same angle. For me, I only see from an angle of people prosperity, not from government or opposition. Thanks for reading, I am not only bad in Myanmar writing but also in English. Sun Tzu’s quote
June 1, 2010 at 8:16 pm Reply
I have to explain my idea encouraging all Burmese to boycott the election2010 in response to NLD decision to stay away from 7-step road map. The Burmese people are unfortunately against own fascist army. The army`s cruelty is supported by permanent member of UN Security Council, China. China, Russia and Asean states sited the theme of non-interference in affair of Burma. They believe Burmese problem is only for Burmese to get involve and solve the national problem. Other nations also have to follow this international civilisation not to disturb other nations. It is bloody clear that Burmese people are at the mercy of its Fascist army. NLD and people got no chance to match the brutality of Junta. The Junta had shown the world that they were not hesitate to kill the revered monks to put down the discontent of public. Burmese people have to play the major role in this election by boycotting the election in millions. This is the only way to avoid the post election military dominance of Burma and become legal guardian and owner of country. Daw Suu had told NLD that she had decided to boycott Election but it was for members to make decision about it as NLD is not her property. Burmese people had to make critical decision to boycott the Election. Yes, the Election Day with deserted town and cities with few people at polling station will be more than enough evidence for UN to consider non-recognition of illegitimate result and resultant winner of fake theatrical play. It will get uglier if military convoys seen on the streets on Election Day. The worst for Than Shwe is to send his hard-core criminals to every doors in town and villages to flush out people and gun totting bandits escorting people to poll. How about the photos of world first Nazi Gestapo-style torture scenes around the polling stations. This is what people will do their bit as the only option left for them for the very survival of people.
My friend, Than Shwe will never ever give power to civilian democracy or civilised people. Than Shwe and his crime-ridden generals do not trust each other. One wrong step Than Shwe made, he will go to hell. Those who dare to dream in the play of Than Shwe Election will be swallowed by cruel system of militarism. Than Shwe will never give democracy to people. One must look at the world history to understand the Dictators and their subordinates in the sovereign countries. Anyway, I pay my full respect for those who co-operate with Junta and still achieve helping the poor and survivors of Nargis Cyclone. I truly believe that Burmese people on their own without help of anyone will need to do their bit so that international citizens will recognize your genuine desire for democracy. Junta will never be legitimate guardian of Burma.
June 1, 2010 at 9:03 pm Reply
ရှေးအခါက ဗာရာဏသီပြည်မှာ မိုးတွေခေါင်တဲ့အခါ ချောင်းကန်မြစ်ချောင်းတွေ ရေခန်းပြီး ရေသတ်သ၀ါတွေ ဒုက်ခရောက်ကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ တနေ့တော့ မြစ်ကမ်းဘေး လူတယောက်က အိုးကြီးတလုံးထဲရေထည့်ပြီး ရေနွေးအိုးတယ်ပါတယ်။ ရေတွေပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အခါ ရေနွေးအိုးပေါ်မှာ တုတ်တန်းတခု ထိုးပြီး ထားတယ်ပေါ့..။
ပြီးတော့ ရေနည်းလို့ ဒုက်ခရောက်နေတဲ့ မြစ်ထဲကဂဏန်းတွေကို အဲဒီတုတ်တန်းပေါ်က ဖြတ်လျှောက်ခိုင်းတာပေါ့။ ဟိုဖက်ရောက်တဲ့ဂဏန်းကို သူကရေပေါတဲ့ အင်းအိုင်မှာ သွားလွှတ်ပြီး ကယ်တင်ပေးမယ်ဆိုပါတယ်။
“ဂဏန်းများကို ကျွန်တော်ကယ်တင်နေသည်..အဲ..အဲ..ကယ်တင်သူကြီး” ဆိုပါစို့..။
ဂဏန်းတွေဟာ အသက်နဲ့ရင်းပြီး လျှောက်ကြရပေမဲ့ ရေနွေးငွေ့ အပူဒဏ်ကြောင့် အကောင်ငယ်လေးတွေ။ အကောင်လတ်တွေ ရေနွေးအိုးထဲ တော်တော်များများကျ သေကြပါလေရော..။ အောင်မလေး..ဂဏန်းပြုတ်နံ့ လေး..တသင်းသင်းနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့..။
အဲဒီလိုနဲ့…တချိန်တော့…ဂဏန်းတွေအားလုံးထဲမှာ ကျမ်းမာပြီး သန်စွမ်းဟန်ရှိတဲ့ အကောင်ကြီးကြီးဂဏန်းကြီးဖြတ်လျှောက်ရမဲ့အလှည့်ရောက်ပါတယ်။
ဂဏန်းကြီးက အပူဒဏ်ကြံ့ ကြံ့ခံပြီး အိုးရဲ့ ဟိုဖက်အနားစွန်းရောက်အောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်သွားပါတော့တယ်..။
“ဂဏန်းကြီး..နင်ကအကောင်ကြီးတယ်….၂ခါလျှောက်” လို့ ပြောလိုက်သတဲ့..။
ဒီပုံပြင်လေး..ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတာပါ။ အသေးစိတ်မမှတ်မိတော့လို့..လိုရင်းပဲ..ဇြည့်အစာသွပ်ပြန်ရေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး…အသေးစိတ်သိသူများ ..တိတိကျကျလေးရေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
တခါနဲ့တခါ.အနှစ် ၂၀ တောင်မှကြာတာမဟုတ်တာနော…။ အစအဆုံးသာ သေချာဖတ်လိုက်ပါ။
တခါတလေ..ပုံပြင်လေးတွေက…အပျင်းပြေစေတယ် မဟုတ်လား..။ bigcat
June 1, 2010 at 9:54 pm Reply
who is sayagyi? I think he isahypocrite.
July 5, 2010 at 6:55 am Reply
it is true that, the first priority should be for the People of Myanmar.
အာဃာတ တွေထက် ပြေလည်နိုင်ရေး ကို ရှေ့ရှု ဖို့မေ့နေကြတာပါ။
အဲဒီ အာဃာတ စကားကြောင့်ပဲ ပြဿနာ က ၉၀ခုနှစ်မှာတင် မပြေမလည် ဖြစ်သွားတာပါ။
လူပြိန်းကြိုက်စကား လူကြိုက်များမယ့် စကားပြောရတာ လွယ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားတွေရဲ့နောက်ဆက်အကျိုးက ခံစားရခက်လွန်းတယ်။
ကျေးဇူးတင်စကား လှမ်းမပြောပဲ မနူးမနပ် အဘိုးကြီးတွေက ရန်စကား ထပြောလို့ အားလုံး ခွေးဖြစ်နေရတာ။
အခုတော့ ရန်ဖြစ်ရင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ ညှိမရတော့ပါဘူး။ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အာဃာတ ပါ။